Mazan-doha manohy mamono biby marobe atao fanatitra ho an’Andriamanitra ny ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Tena mifàka lalina any amin'ny faritra sasany ilay fomba fanao
Voadika ny 29 Avrily 2020 13:37 GMT
Pikantsary avy ao amin'ny “Ao anatin'ny fombandrazana ara-poko amin'ny fiankohofana sy fanaovana sorona masina”, lahatsary iray fanadihadiana nataon'i Saprina Panday. Nahazoana alàlana.
Fanamarihana: Ny mpanoratra ity lahatsoratra ity no nitarika sy nanatontosa ny fanadihadiana fohy, “Ao anatin'ny fombandrazana ara-poko amin'ny fiankohofana sy fanaovana sorona masina”. Izy ihany koa dia mpikambana avy ao anatin'ny foko Upamanya Gotra (Pandey).
Any amin'ny faritra samihafa ao Nepal, mbola ampahany miroborobo be amin'ireo fetibe ara-pinoana sasany ny fanaovana sorona biby. Raha mitodika amin'ilay fetibe Gadhimai malaza ny sain'izao tontolo izao, marobe koa ireo fety madinidinika ara-pivavahana no ahitàna endrika fanaovana sorona izay heverin'ireo mpikatroka fa misy fomba fanao feno halozàna. Na eo aza ny fanoherana tsy mitsahatra ataon'ireo vondrona mpiaro zo sy mpanao lalàna mikendry ny handraràna ilay fanao, tena mbola mifàka lalina any anatin'ny fenitr'ireo vondrompiarahamonina sasantsasany ny fanaovana sorona biby.
‘Fandraràna’ ny fanaovana sorona biby
Nisarika ny sain'izao tontolo izao ny fetibe Gadhimai, antsoina matetika ho ny famonoana biby betsaka indrindra eto ambonin'ny tany taorian'ny fanentanana nanoherana ilay hetsika tamin'ny 2009 nataon'ireo mpikatroka erantany ho an'ny zon'ny biby, toa an'i Brigitte Bardot. Isaky ny 5 taona izy io no atao ao amin'ny Tempoly Gadhimai ao Bariyarpur manakaiky ny sisintany indiàna.
Vakio misimisy kokoa: Hampitsahatra ny sorona biby efa fanaony nandritry ny taonjato taona maro ve ny Tempoly Gadhimai ao Nepal?
Taorian'ny tsindry tsy nitsahatra nitombo avy amin'ireo vondrona (ao an-toerana sy erantany) mpiaro zon'ny biby, nambaran'ny Fitsarana Antampony ao India tamin'ny 2014 fa tsy ara-dalàna ny fitaterana biby miampita ny sisintany ao Gadhimai raha tsy manana fahazoandàlana. Nanaraka izay zotra izay ny Fitsaràna Antampony ao Nepal tamin'ny nanomezany baiko ny governemanta mba handrafitra tetikady hanafoanana miandàlana io fanaovana sorona biby io. Tamin'ny 2015, na ny Tempoly Mahatoky ao Gadhimai aza dia nanaiky ny handràra ilay fanaovana sorona biby.
Kanefa, na misy aza ny ‘fandraràna’, nisy ihany ny fetibe Gadhimai natao tamin'ny 2019.
#Nepal tempoly mandràra ny fanaovana sorona biby amin'ny fetibe #Gadhimai hoe ?
Toherinay ny halozàna ampiharina amin'ireo biby.
Misy ny fandraisana tsy an-kifidy an'ireo biby eny aminà kianja malalaka. Tsy ny biby rehetra no voatapa-doha.
Tsy afaka hampitsahatra ny fanaovana sorona biby ny kaomity mpitantana an'ilay fetibe pic.twitter.com/eNbKhPlrBw
Kianja famonoana #GadhimaiFestival #Gadhimai #Nepal #AnimalRights #animals
saripika sy lahatsary an'i @fotomanish.
Saripika maromaro kokoa ato: https://t.co/2YDogjGRnv@SnehaCare @HSIGlobal @NawrcOrg @AnimalNepal @Himal_Khabar pic.twitter.com/mZSpiOHh7f
— Nepali Times (@NepaliTimes) 4 Desambra 2019
Ny fombandrazana ara-poko sy ny Kul Devata Puja
Ny zavamisy hoe ilay fetibe fanaovana sorona biby, goavana indrindra erantany sy malaza ratsy indrindra tsy nizotra nankany amin'ny fandraràna manontolo dia toy ny manao hoe vao mainka hihamafimafy kokoa ny hanajanona ilay fomba fanao mandritra ireo hetsika kely madinidinika toy ny Kul Devata Puja.
Ny Kuladevata dia manondro ilay fombafomba fiankohofana izay lalain'ireo foko miavaka manaraka ny finoana Hinduoe. Mandritra ny Kul Devata Pujas, mihaona ireo foko samihafa – na dia misy elanelana tsy itoviana aza – mba hamelomana indray ny dikan'ny vondrompiarahamonina sy hiankohoka amin'ireo andriamanitra masin-dry zareo. Matetika ny fanaovana sorona biby no mandrafitra ampahany iray manontolo amin'ilay fotoam-piankohofana sy fananganana ny fihavanana.
“Ao anatin'ny fombandrazana ara-poko amin'ny fiankohofana sy fanaovana sorona masina” dia fanadihadiana fohy tokamiavaka notontosaina tamin'ny Martsa 2020 ary nafantoka tamin'ny fanaovana sorona biby ao anivon'ny foko Upamanyu Gotra (Pandey), foko iray izay mihaona in-dray mandeha isaky ny 12 taona any amin'ny ilany atsinanan'i Nepal.
Natrehan'olona an'arivony maro, nitondra nankany amin'ny famonoana osy an'arivony maro ny hetsika tamin'ity taona ity, amin'ny finoana fa ny fanaovana izany dia hanamasina ny fanirian'ilay masina, ary hitondra mankany amin'ny fahatanterahan'ny faniriana amin'ny hoavy. Tao anatin'izany, marobe ireo mpikambana avy amin'ny vondrompiarahamonina no nahita fomba iray hamatorana ny fihavanana.
Antsafa iray nifanaovana tamin'i Surya Bahadur Pandey tonga nanatrika ilay fetibe no mampiseho fa, na eo aza ny fahatongavantsaina tsy mitsahatra mitombo momba ny fanaovana sorona biby, mbola maro ireo mifikitra amin'ny fombandrazana fitondràna sy famonoana osy:
Fantatray fa tsy rariny ilay izy. Saingy izay no fanabeazana sy fombandrazana azonay. Tsy ho izao dieny izao izahay no ho afaka hanova izany, fa ho miandàlana ny fiovàny. Samy maniry ny tsirairay ny mba hisian'izany, saingy tsy tampotampoka eo ianao dia ho afaka hanova ny fanabeazana voarainao. Ary noho izay antony izay, mbola mitohy ny fanaovana sorona.
[Fampitandremana:] Misy sary mahery setra ao anatin'ity lahatsary ity.
Na dia mampiavaka manokana io foko io aza ny hetsika hita anatin'ity lahatsary ity, ny finoana manodidina ny fanaovana sorona biby dia tsy mifankaiza amin'ny fombafomba hafa manerana ny firenena, na aiza na aiza anaovana sorona, na io Kul Devata Puja na io Fetibe Gadhimai.
Mitombo ny fahatsiarovantena, mitombo ny hatezerana
Maro no naneho hatezerana manoloana ny halozàna atao amin'ireo biby mandritra ireo fetibe fanaovana sorona manerana ny firenena. Ilay vondrona Nepaley mpikatroka mpiaro biby, Bloodless Gadhimai, dia im-betsaka nanao fanentanana mba hanandramana hanova ny fomba fijerin'ny olona.
Tena maro loatra ireo biby, ary marobe no tsy tapahana araka ny tokony ho izy aza ny lohan'izy ireny satria ny antsy dombo vokatr'ilay famonoana tambabe. Matetika no im-betsaka ry zareo no mandidy ilay biby, ary dia mijaly ora maro ilay biby vao maty,” hoy ilay Saroj Nyaupane, olon'ny media.
Io hatezerana io ihany koa dia nitondra nankany amin'ny antso ho fampitsaharana ny fanaovana sorona biby nandritra ny fetibe Dashain izay ankalazaina miaraka amin'ny vavaka sy fanatitra ho an'i Durga.
#Dasain mila atsahatra ny fanaovana sorona biby aty #Nepal.
Ao #Kullu #India nitranga izany saingy nosoloina voanio
Tao #Mysore voatavo monta fotsy no napasaka
— Sujeev Shakya (@sujeevshakya) 21 Oktôbra 2015
#Dasain dia midika osy laroina ‘curry’ & azoko antoka fa vitsy ireo Nepaley no hihevitra ny osy ho toy ny zava-mananaina manana fihetsehampo & manan-tsaina https://t.co/dOVUYHhVnG pic.twitter.com/YTflLyyMh3
— Nepali Times (@NepaliTimes) 11 Oktôbra 2016
Mahavelom-bolo ny hoe manova ny fenitra sôsialy ity foto-pisainana vaovao ity, ary marobe ireo mponina ao an-toerana no nisafidy ny ‘sorona’ voanio sy voatavo fa tsy biby.
Saingy mazava fa ny sorona biby dia ampahany amin-javatra iray lehibe kokoa fa tsy fomba fanao tsotra fotsiny. Ampahany iray mifàka lalina ao anatin'ny fenitra ara-kolontsaina sy ara-pombandrazana izy io, ary manana dikany lehibe ho an'ireo marobe manao azy. Ny fiezahana hanao maso be tsy mahita ny endrik'izy io dia vao mainka hampaharitra fotsiny ny tsy fiovan-javatra, ary araka izany dia tena tsy maintsy atao ny fandraisana anaty kajikajy azy rehefa hametraka fomba vaovao hampitsaharana ny fijalian'ireo biby.